बल्ल मिलायो राजपा नेपालले समानुपातिक झन्झट, को भए इन को भए आउट ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » बल्ल मिलायो राजपा नेपालले समानुपातिक झन्झट, को भए इन को भए आउट ?
ESAHARATIMES Friday, January 12, 20180No comments
काठमाडौ पुस २८ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजाप नेपाल) ले समानुपातिक सूचीको विवाद मिलाएको छ । आयोग र राजपा नेपालबीच कुरा नमिल्दा संशोधन सूची बुझाउन ढिलाई भइरहेको थियो ।
क्रमसँख्या र समावेशी समूह अनुसार सूची नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेर पठाउन पत्र पठाए अनुसार राजपा नेपालले सो सूची मिलाएको हो । राजपा नेपालले प्राप्त गरेको समानुपातिक सीटको सूची आयोगमा बुझाउँदा क्रमसँख्या र समावेशी समूह नमिलेको भन्दै त्यसलाई मिलाएर पठाउन आयोगले पत्र पठाएको थियो । तर सो पार्टीले नसच्याईकन जस्ताको त्यस्तै सूची पठाएपछि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
आयोगले अर्को पत्र पठाएर क्रमसँख्या र समावेशी समूहको आधारमा मिलाएर पठाउ नभए सो दलको हकमा समानुपातिक उम्मेदवारको परिणाम खाली पठाउने चेतावनी दिएपछि मात्र राजपा नेपालका नेताहरु बैठक बसेर त्यसलाई टुग्याउनु भएको हो । राजपा नेपालका नेताहरु लगातार तीन दिनसम्म बैठक बसेर त्यसलाई मिलाउनु भएको हो । यसअघि पठाएको १० जनाको नाममध्ये चार जनाको नाम हटाएर क्रमसँख्याको आधारमा अर्को चारजनाको नाम समावेश गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
राजपा नेपालले पठाएको १० जनाको सूचीमा रामप्रवेश वैठा, लैला खातुन, पुनम यादव र विभा झाको नाम हटाएर नेत्र विक्रम साह, निराकुमारी साह, अल्का झा र डा.रिना यादवको नाम समावेश गरेको राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्यले जानकारी गराउनुभयो । राजपा नेपालले बुझाएको समाुनपातिको सूचीमा मधेशी र थारु बाहेक अरु कुनै समावेशी समूह छुट्याएको छैन ।
दुई नम्बर प्रदेशबाट पठाएको ४३ जनाको सूचीमा सबैलाई मधेश समूहमा नै राखिएको छ । जब कि त्यस सूचीमा थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र खस पनि रहेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि त्यस्तै गरेको छ । सात नम्बर प्रदेशमा तीनजनालाई खस र अरु सबैलाई थारु समूहमा नै राखेको छ ।
\_यसरी राजपा नेपालले समावेशी समूह मिलाएर सूची नबुझाउँदा क्रमसँख्याको आधारमा मात्र नाम बुझाउन लागेको छ । आयोगले क्रमसँख्याको आधारमा तीनजना पुरुष र सातजना महिलाको नाम दिन आग्रह गरेपछि राजपा नेपालले सोही अनुसार सूची तयार गरेर शुक्रवार आयोगलाई बुझाउन लागेको बताइएको छ ।
राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले आयोगले पठाएको पत्र अनुसार नै संशोधन सूची बुझाउने जानकारी गराउनुभयो । आफूहरुले बुझाएको नाम समावेशी आधारमा नै पठाएको थियो तर आयोगले क्रमसँख्या नमिलेको भन्यो भनि उहाँले दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नामको बारेमा टुगों लागेको छैन, भोली बसेर टुगों लगाई आयोगलाई बुझाई दिन्छौ ।’ उहाँले त्रुटी दुवै पक्षबाट भएको कारणले यस्तो ढिलाई भएको बताउनुभयो ।